Inona marina no tena sainin’ny vahoaka japoney tamin’ny Olaimpika? · Global Voices teny Malagasy
Manome hevitra sasantsasany ny Twitter API
Voadika ny 17 Septambra 2021 4:37 GMT
” Lalao Tokyo 2020 Olaimpika/Paralaimpika.” Sary avy amin'i Dennis Amith, tao amin'ny Flickr. Fahazoan-dalana: CC BY-NC 2.0
Taorian'ny volana maron'ny “fifaharana, fikomiana sy fahavinirina” nateraky ny fanemorana naharitra an-taonany noho ny valan'aretina, nampiantrano ny Olaimpika Asara 2020 ihany i Japana nony farany manomboka ny 23 Jolay ka hatramin'ny 8 Aogositra ao Tokyo. Ho fitsapana ny fihetseham-pon'ny vahoaka aorian'ny fiafaran'ny Lalao Olaimpika, nampiasa ny Twitter API ny Global Voices mba hanarahana ireo resadresaka anjotra.
Tamin'ny fikarohana teo aloha nataon'ny Global Voices momba ny fihetseham-pon'ny besinimaro tamin'ny Jona 2021, iray volana talohan'ny nanombohan'ny Lalao ny fanadihadiana. Nahita izahay fa tsy mankasitraka ny Olaimpika Tokyo ny ankamaroan'ny vahoaka Japoney – farafahakeliny izany hita tao amin'ny Twitter – ny antonyankapobeny dia noho ny fiakaran'ny tranga COVID-19 tamin'izany fotoana izany.
Amin'ny lafiny iray, talohan'ny lalao, nisy ny fisarahana teo amin'ireo izay nanohana ny Lalao Olaimpika sy ireo izay nanohitra azy tany Japana. Ohatra, matetika ny haino aman-jery nitsikera ireo olana isan-karazany manodidina ny Lalao Olaimpika, toy ny fahatsapana fa tsy misy ny fepetra hampihenana ny loza mety hiharan'ny COVID-19.
Nanontany tena ny antoko mpanohitra hoe maninona ny governemanta no tsy hanafoana ny lalao taorian'ny fanambarana ny firenena an-kamehana noho ny aretina any Tokyo. Tantara ratsy vaovao iray hafa nanasongadina fa navily nampiasaina tamin'ny Olaimpika ny vola tokony nampiasaina tany am-boalohany hanampiana amin'ny fanarenana indray ny faritra saro-dalana ambanivohitra Tohoku taorian'ny horohoron-tany goavana, onja-dranomasina maloto ary loza nokleary tamin'ny taona 2011.
Na izany aza, rehefa nanomboka ny lalao tamin'ny 23 Jolay, toa niova ny feo ratsy tao Japana. Lasa maro tany Japana no hita fa lasa mpanohana ny olaimpika – farafaharatsiny anjotra.
Mpaneho hevitra iray tao amin'ny Diamond Online, gazety antserasera mpivoaka isan-kerinandro nanamarika fa:
Toy ny hoe misy ny fitomboan'ny fihetseham-po manebaka ireo izay “manohitra ny Lalao Olaimpika.” Ohatra, rehefa misy olona teo aloha nanohitra ny Lalao Olaimpika kanefa miarahaba olona nahazo medaily, dia voavely izy ireo hoe: “Efa nanohitra ny Lalao Olaimpika ianao hatrizay! Nahoana no faly amin'ny medaily ianao izao?
Na izany aza, toa vetivety ihany ny fifalian'ny besinimaro momba ny Lalao Olaimpika nahemotra ela. Ohatra, taorian'ny nifaranan'ny Lalao Olaimpika Tokyo tamin'ny 8 Aogositra, nanomboka nipoaka (nihena) ny fanohanan'ny vahoaka ny governemanta izay nanatontosa hetsika toa nahomby, araka ny valim-panadihadiana natao tamin'ny volana aogositra. Toa noho ny aretina COVID-19 nihombo no anton'ny fihenana be amin'ny lazan'ny governemanta, ary koa ny tsy fandraisan'ny governemanta andraikitra hita hiatrehana ny krizy.
Mba hanombanana tsara kokoa ny toe-tsain'ny vahoaka any Japana taorian'ny Lalao Olaimpika ny 10 Aogositra, roa andro taorian'ny nifaranan'ny Lalao, dia nampiasa ny Twitter API ny Global Voices mba hanangona sioka 673.841 izay misy ny teny fototra “五 輪” na “オ リ ン ピ ッ ク”, samy teny Japoney mahazatra ho an'ny ny Lalao Olaimpika.
Tamin'ireo sioka efa ho 674.000 nataonay fanadihadiana, manodidina ny 75 isan-jato (sioka 516.000) no nampitaina (RT). Araka ny hitantsika tamin'ny fikarohana nataonay tany am-boalohany tamin'ny volana Jona 2021 momba ny fahatsapana ny Olaimpika, dia kaonty vitsivitsy no mitarika ny resaka.
Ambonin'izany, toy ny fikarohana nataonay tamin'ny volana Jona, nahita ihany koa izahay fa kaonty vitsivitsy kokoa mandefa sioka orizinaly no saika tompon'andraikitra amin'ny resaka iray manontolo amin'ny aterineto. Sioka 1.000 monja, rehefa namerina ni-tweet, no nahitana ny 50 isanjaton'ny sioka rehetra milaza ny Lalao Olaimpika:
Sioka mifandraika amin'ny Lalao Olaimpika, 23 Jolay – 10 Aogositra 2021. Indray mipika avy amin'ny Global Voices.
Ireo sioka 1.000 avy eo dia azo zaraina ho sokajy lehibe telo: COVID-19; “Bach” (ny filohan'ny komity olympika iraisam-pirenena mampiady hevitra malaza ratsy amin'ny tsy firaharahiany ny fameperana COVID-19 sy ny tsy fahatsapana ny tantaran'ny japoney); ary, “TV Asahi” (fampielezam-peo amin'ny fahitalavitra izay tsy niraharaha ny fepetra ara-pahasalamana COVID-19 ihany koa ny mpiasa ao aminy):
Amin'ny fandalinantsika ireo siokaa efa ho 674.000, manodidina ny 50 isanjato no azo sokajiana amin'ny lohahevitra telo. Fampisehoana an-tsary avy aminny Global Voices.
Manodidina ny 27 isan-jaton'ny retweet (tweet 92000) no mifandraika amin'ny COVID-19. Ny ankamaroan'ireo bitsika ireo dia naneho ny tahotra ny fiakaran'ny tahan'ny aretina amin'ny volana Jolay sy Aogositra.
Ho setrin'izany, kaonty 343 fotsiny no mandrafitra ny antsasaky ny retweet rehetra. Ireto “kaonty 10 ambony indrindra” ireto, raha ny ankamaroan'ny re-retweet, dia misy ny mpitari-kevitra media sosialy, olo-malaza haino vaky jery ary ny fikambanam-baovao:
Ny kaonty faharoa, fahatelo ary fahadimy nampita sioka be indrindra (etsy ambony) dia tranokalam-baovao ni-tweet ny rohy mankany amin'ny tantaran'ny vaovao momba ny tsy rariny amin'ny olaimpika mahazatra ny Japoney, na ny fandrahonana ateraky ny fiakaran'ny tranga COVID-19 tany Japana tamin'ny Jolay sy Aogositra, nandritra ny Lalao. Kaonty # 7, @yatuzo, dia kaonty marika an'ny mpivarotra antsinjarany iray.
Ny iray amin'ireo sioka tena nahasarika momba ny COVID-19 tamin'ny ankapobeny dia naverina in-3.901 tao anatin'ny iray andro. Nasongadin'ny sioka fa, na dia efa vonona hiditra amin'ny fitsapana haingana aza ireo atleta olaimpika, izay heverina fa fomba iray hanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19, dia tsy nanao fitiliana an'ireo olom-pirenena japoney tsotra tamin'ny ankapobeny ny governemanta Japoney.
Momba ny fitsidihan'ny filohan'ny CIO Bach tao Ginza, ny minisitra olaimpika Marukawa Tamayo no nilaza, “Afa-manapa-kevitra i [Bach] raha ‘tokony atao’ na tsia ny fitsidihana an'i Ginza.” Izany hoe milaza amiko ianao fa afa-mitsarana ny maha-ilaina izany dia izany ihany koa aho?
Nisy retweet miisa 42.000 (tokony ho 12 isanjaton'ny sioka nampitaina) mitsikera ny fahitalavitra TV Asahi, izay nikarakara lanonana mahamamo niafara tamin'ny faharatrana ny mpiasa tao aminy, na dia teo aza ny fepetram-pahasalamana noho ny COVID-19. Nisy sioka iray nitsikera ny TV Asahi vita retweeted in-8.620.
Tamin'ny takarivan'ny 8 aogositra, alin-danonana fanakatonana ny lalao olaimpikan'i Tokyo, mpiasa folo avy ao amin'ny sampana fanatanjahantena an'i TV Asahi no nikarakara lanonana tao amin'ny restaurant iray tao Tokyo. Mpiasa vehivavy iray efa varimbariny no nianjera tsinahy avy amin'ny rihana faharoa ka nahatapaka ny tanany. Lanonana fanaovam-beloma ny lalao olaimpika izany.
Raha tsaraina avy amin'ny sioka natao nandritra ny lalaon'i Tokyo, dia natahotra valan'aretina ny olona, ary sorena tamin'ny fanaovana tombo sy hala — misy ny lalàna natao ho an'ny vahoaka japoney, ary misy iray hafa ho an'ny mpikambana ao amin'ny Komity Olaimpika Iraisampirenena, toy ny Filohan'ny CIO Thomas Bach.
Ny setriny anjotra nandritra sy taorian'ny lalao olaimpika no manondro fa lanonana (tranga) politika ny valan'aretina. Ny tranga politika manaraka ao Japana moa dia ny fifidianana hotontosaina amin'ny volana Oktobra, izay hanombanan'ny vahoaka japoney ny asa vitan'ny governemanta, ary tafiditra amin'izany ny setriny amin'ny lalao olaimpika sy ny COVID-19 ho toy ny hetsika (lanonana-tranga) politika.